Izindaba - Umkhuba nokuthuthukiswa kwamathuluzi emishini
Ephakathi CNC Lathe Machine
Slant Umbhede CNC Lathe Machine
Ingxubevange Wheel CNC Lathe Machine
Kuqondile Machine Centre
Lathe Futhi Milling Ibhokisi
Flat Umbhede Lathe Futhi Milling Ibhokisi
Slant Umbhede Lathe Futhi Milling Ibhokisi
Umkhuba nokuthuthukiswa kwamathuluzi emishini
Ukuthuthukiswa kwamathuluzi emishini akunakwehlukaniswa nezidingo zentuthuko zomkhakha wokukhiqiza wesikhathi esizayo. Isibonelo, ukuthuthukiswa kwezimboni ezinjengezamandla, ukudla, ezobunjiniyela bezokwelapha, ezokuxhumana, ezemishini nemishini yezolimo kuzoba nomthelela omkhulu ekwakhiweni kwamathuluzi emishini esikhathini esizayo.
Isibonelo, okokusebenza ezimbonini ezifana namandla nemishini yezolimo imishini emikhulu ngokuvamile. Lapho ucubungula le mishini, ithuluzi lomshini lidinga ukuba ne-torque ephakeme yokuphotha, amandla aphezulu wokuphotha nendawo enkulu yokusebenza. Isidingo esithile samathuluzi omshini ukuba nemisebenzi eminingi yangokwezifiso esikhundleni semishini ethile.
Imishini kwezobunjiniyela bezokwelapha, ezokuxhumana nezinye izimboni imishini emincane ngokuvamile. Izingxenye zale mishini ziya ngokuya zincipha, isakhiwo siya sihlangana ngokwengeziwe, futhi izindawo ezahlukahlukene zokusika ziyadingeka ngenkathi kucutshungulwa. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukucubungula izinto ezinzima ukusika ezifana nama-titanium alloys. Ngakho-ke, ukucacisa okuphezulu nokuqina okunamandla kuyadingeka ekucubunguleni imishini. Ngokuya ngezidingo ezithile zokukhiqiza, ubunjiniyela bezokwelapha (izixazululo eziqondisiwe) zidinga ivolumu encane nekhwalithi ephezulu. Emkhakheni wezobuchwepheshe bezokuxhumana, kudingeka usayizi omncane nezindleko eziphakeme zokuncintisana.
Embonini yokukhiqiza izimoto, imvamisa ingumkhiqizo ohlanganiswe kakhulu, odinga ukuhlanganiswa kobuchwepheshe obuhlukahlukene bokwenza endaweni encane. Lokhu kudinga ubuchwepheshe obusha bokucubungula ukucubungula izinto ezintsha zensimbi, kanye nemishini emisha yokucubungula ukucubungula izinto ezintsha ezifana nezinto ze-fiber. Isidingo somkhakha wokukhiqiza izimoto wamathuluzi omshini ukuthi ngokuzayo, umshini owodwa ungasetshenziselwa ukucubungula nokuhlangana. Mayelana nokusatshalaliswa kwamathuluzi omshini, amathuluzi emishini adingeka ukuthi abe nendawo enkulu yokucubungula futhi alungele ukukhiqizwa ngobuningi.
Uma ubheka izidingo zezinhlobo ezahlukahlukene zezimboni zamathuluzi omshini, ngokuzayo, amathuluzi emishini kufanele ahlangabezane nalezi zidingo eziyisisekelo ezilandelayo: amaphutha amancane okunemba, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, isikhathi sokucutshungulwa esifushane, ukusebenza kahle kwemishini ngokuphelele nokusimama.
Kunezidingo ezahlukahlukene ezihlukile zemikhiqizo ehlukile: osayizi abahlukahlukene, imikhiqizo enhlobonhlobo, kanye nokusebenza kwezinto ezintsha.
Kunezindlela ezimbili ekuthuthukisweni kwesikhathi esizayo kwamathuluzi wemishini: ukwenziwa kohlelo oluphelele lokukhiqiza oluhlangabezana nezidingo ezithile zamakhasimende; kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle konke nokusimama kwemishini.
Isikhathi Iposi: Feb-28-2021
Ukumisa okwenziwe ngokwezifiso, ukubukeka kuyatholakala